IINKQUBO EZILI-10 EZIPHAMBILI ZOPHUCULO LWEPHULI (YASIMAHLA KUNYE NENTLAWULO) - AMACHIBI OKUDADA
Eyona amachibi Okudada Iinkqubo ezili-10 eziphambili zoPhuculo lwePhuli (yasimahla kunye neNtlawulo)
Iinkqubo ezili-10 eziphambili zoPhuculo lwePhuli (yasimahla kunye neNtlawulo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwisoftware yoyilo lweephuli kubandakanya simahla kunye neenkqubo ezihlawulelwayo kunye neempawu zazo.
Ngaphandle kwendlu yangaphakathi yesiqhelo nangaphandle, ichibi lokuqubha mhlawumbi yenye yeempawu zekhaya ofuna ukuba lisebenze kwaye lihle kwangaxeshanye. Emva kwayo yonke loo nto, le yindawo yakho yangasese yangasemva.
Zininzi iziqwengana zesoftware phaya, ngakumbi phantsi kodidi lweKhompyuter yoYilo oluNcedisiweyo (i-CAD) abanokuthi bayile; kodwa yeyiphi eyona nto ilungileyo isoftware yokuyila iphuli yokudada?
thanda ixabiso kuye kuye
Ukuba ujonga isoftware yoyilo lwechibi kwiMac okanye iPC, apha ngezantsi luluhlu lwezinto esizikhethileyo zesoftware yoyilo lwedama (yasimahla kunye nehlawulelweyo) esicinga ukuba ingangoyena ndoqo kuyo nayiphi na iprojekthi yoyilo lokuqubha.
I-Spectrum ye-Idea (Isilingo sasimahla, esihlawulelweyo)
Ulwakhiwo lweStudiyo (Uvavanyo lwasimahla, oluhlawulelweyo)
Isoftware yoyilo lwasekhaya i-DreamPlan (Isilingo sasimahla, esihlawulelweyo)
Izicwangciso zamachibi akho (ahlawulelweyo)
Izikhokelo zePhuli (Simahla)
Yila ipuli yakho ekwi-Intanethi (Simahla)
Amachibi eNkulumbuso kunye neeSpas (Simahla)
Isoftware yoyilo lwasekhaya yoyilo (ihlawulwe)
Isicwangcisi 5D (simahla kwaye sihlawulelwe)
Isiphelo: Uyilo lwePhuli lweSoftware ehlawulelweyo okanye hayi?
Linganisa amanzi kunye nokukhanya ngexesha langempela kunye ne-Idea Spectrum's Realtime Landscaping Architect suite yesoftware.
Inkqubo iza nokulula, kulula ukuyisebenzisa kunye nokuqonda ujongano apho unokuyila khona iphuli yakho ukusuka kumbono ophezulu we-2D apho ubeka khona zonke izinto ezahlukeneyo ezinjengeendlela, uthango, amatye, izibane, izityalo, njl.
Emva kokubeka izinto ezahlukeneyo, ungatshintsha phakathi kwesicwangciso okanye umbono wombono, wokugqibela ekuvumela ukuba ujonge uyilo lwakho lwe-3D.
Le software inokukhutshelwa njengemveliso yesilingo yasimahla kwaye isebenzise uguqulelo olupheleleyo, kufuneka umrhumo wexesha elinye. Akukho sidingo sokuhlawula umrhumo wobhaliso.
I-Spectrum yeMbono - Ndwendwela iwebhusayithi
Ngaba unombono ngedama kodwa ungakulungelanga ukuyila? Ngoku ungabona ngokulula iphuli yakho yokuphupha ibe kukunikezela okungokoqobo kwe-3D.
Ukuba uchwephesha, ungabonisa uyilo lwakho kumthengi wakho ngokulula, ukuba ungumxhasi, akukho sidingo sokuxovula ngamagama ukuchaza into onayo engqondweni.
Ukucofa nje kancinci kunye nale software kwiiyure ezimbalwa kuya kukuvumela ukuba unikeze amachibi amnandi eCGI.
Umdlalo ujongano lomdlalo ujonge ngakumbi njengoko unokulindela kwisoftware yeCAD kodwa iya kukhula ekugqibeleni. Abaqulunqi kufuneka babeke uyilo lwabo ngendlela ye-2D kwaye isoftware iyakukukhathalela konke ukukhupha yonke into kwi-3D.
Isiphumo somfanekiso we-3D siyinyani ukunika umbono olungileyo wento enokuthi isiphelo sayo sibe kukugqibela. Isoftware inokunikezela ngamanzi afanelekileyo, ukukhanya, ukubonakalisa, kunye nezithunzi ngexesha langempela.
Ulwakhiwo lweStudios Uyilo lweVidiyo
Uyilo lwesoftware yoyilo lweStudios echibini- Ndwendwela iwebhusayithi
Le software inikezela ngeendlela ezithe kratya njengoko abayili banokubeka izinto ze-3D ngokuthe ngqo kwimephu ngokuchasene nokusebenzisa isicwangciso somgangatho we-2D.
Nangona kunjalo, ukhetho lokuguqula isicwangciso se-2D siye kwi-3D sisekhona. Ujongano lomsebenzisi kulula ngokwaneleyo ukuba uliqonde kwaye nokuba umntu oqalayo angaluthatha ngokulula ulwazi lokuba lusebenza njani.
Kuza nelayibrari enkulu yeempahla ze-3D njengezityalo, iidesika, ifenitshala, okanye imibhobho yamanzi. Ikwanazo neendlela ezahlukeneyo zokukhetha onokukhetha kuzo ukuze unganyanzelisi ukuba ugoceke kuGoogle naphi na xa ufuna.
Isoftware iyafumaneka njengesilingo sasimahla kwaye inokuthengwa njengelayisenisi yorhwebo okanye yasekhaya.
Isoftware yeNHC- Ndwendwela iwebhusayithi
Ngaba ufuna ukuba nephuli eyakhiwe kodwa kungabikho kuyilo lwexesha? Izicwangciso zamachibi akho zibonelela ngenkonzo apho abathengi banakho ukuthenga uyilo lwamachibi okudada ngamaxwebhu afanelekileyo avela kwilayibrari yoyilo esele lwenziwe. Unokufumana unikezelo lwedama lokubhukuda le-3D kunye noyilo lwe-2D.
Isebenza ngokuthenga isicwangciso esinezandiso ezifunekayo. Uya kuthumela i-imeyile ngokuthe ngqo kwinkcazo yeephuli kwinkampani. Iifayile eziyimfuneko ziya kuthi emva koko zithunyelwe kumxhasi.
Le nkonzo iluncedo kwiimeko apho umxholo okanye uyilo lokuqala luyafuneka kwangoko, uyilo lweengcinga lukhona kodwa iimvume kunye nezicwangciso zokwakha ziyafuneka okanye isicwangciso siyafuneka kunye neemvume.
Izicwangciso zamachibi akho - Ndwendwela iwebhusayithi
Yenza umgangatho ophezulu wokunikezelwa kwe-4K kunye neemovie kwimizobo elula ye-2D. Iiprojekthi zephuli akufuneki zibe nzima kwakhona.
Ngezixhobo ezifanelekileyo, abayili banokunika uyilo olunokuguqulwa lube yintengiso yabathengi.
Iingcali ziya kuncitshiswa umsebenzi ngenxa yokuphelisa uqikelelo. Yenza okungakumbi ngexesha elincinci kunye neziphumo ezingcono.
Izikhokelo zephuli - Ndwendwela iwebhusayithi
Uyilo lwamachibi akufuneki lube nzima. Ukusukela kwi-bandwidth ye-intanethi inyuke kakhulu kule minyaka idlulileyo, usetyenziso olupheleleyo lwesoftware ngoku lunokuqhutywa kwilifu. Kwaye ngenxa yoko, kukho iintlobo ngeentlobo zeenkonzo ezikwi-intanethi ezinje ngesoftware yoyilo lwasimahla kwi-intanethi.
Ngokucofa nje okumbalwa, isicwangciso esenziwe nge-3D sinokuveliswa kwi-Intanethi. Inkqubo iya kuqala ngokukhetha iimfuno ezimbalwa ezisisiseko kwiindidi ezahlukeneyo zeephuli.
Emva koko uya kuthatha isigqibo malunga nokuba zeziphi iintlobo zezixhobo oza kuhamba nazo kunye noyilo, njengesixhobo sokucoca amanzi okanye isixhobo sokufudumeza iphuli, kwaye emva koko ukhethe eziphi izinto zokongeza ekufuneka zibandakanyiwe.
Imizekelo yeempawu ziibhabhalaza zomthombo, iingxangxasi, iimbiza zomlilo, umlambo owonqenayo, iijethi ezinamanzi amade, iijethi zedreyini, ibala lokutsala, ukutsiba amatye, umngxuma womlilo, indawo yomlilo, okanye nekhitshi elingaphandle.
Ukuba awukenzi iakhawunti yale sayithi, kuya kufuneka ubhalise enye ngaphambi kokuba unikwe amaphepha afanelekileyo, imizobo, ukuhanjiswa kunye namanye amaxwebhu afanelekileyo.
Yila Pool lakho kwi-Intanethi- Ndwendwela iwebhusayithi
Isoftware eyongezayo ekhwela emva kweMicrosoft Visio. Ivumela abayili ukuba bayile iphuli yabo ngokulula kwaye ngoncedo lwezicelo zeOfisi yeMicrosoft.
Kwangoko uvelise ityala lezinto kwaye uzithumele ngaphandle kwiMicrosoft Excel. Faka idatha njengoMvelisi, indleko, iSKU, inkcazo kunye nabanye.
Isoftware iplagi ibikhona ukusukela ngo-1995 kwaye sisiqwenga esiqinisekileyo kwaye ngokulula yenye yezona mveliso zisetyenzisiweyo zokubonisa.
Kuba imveliso isebenza njengeplagi, iimfuno zenkqubo yayo kufuneka ziqwalaselwe ngaphezulu kweemfuno zesicelo seofisi ye-MS. Iplagi ngokwayo, ngombulelo, ayibizi, ngakumbi yimigangatho ye-PC yezixhobo zangoku.
Utsalo lwamachibi - Ndwendwela iwebhusayithi
Ukuyila iiphuli zokubhukuda, nokuba kumnandi njengoko kunokuba njalo, kunokutya ixesha elininzi. Nokuba ziingcali, kunokuba nzima ukuhlala uhambelana neemfuno kunye nexesha elibekiweyo.
Kulabo bangenakho ukuyila kodwa bafuna nje ukuba baqalise into, le software yasimahla yokuyila iphuli yindlela ekhawulezayo yokufumana iziphumo ezinqwenelekayo.
Abasebenzisi kufuneka bangenise ulwazi olusisiseko olufana nobume bechibi ngokubanzi, izixhobo ezifunekayo, kunye neempawu abafuna ukubandakanywa.
Abasebenzisi kuya kufuneka babhalisele iakhawunti ekwi-Intanethi ukuze baqhubeke nayo yonke inkqubo. Isoftware yokuyila isoftware yasimahla ye-3D ikwabandakanya ezinye iinkonzo ezinje ngokulungiswa kwamachibi kunye nokucoca, ukugcinwa kwezixhobo kunye nohlolo.
IPhuli yeNkulumbuso kunye ne-Spas Uyilo lwePhuli-yakho Ndwendwela iwebhusayithi
Yila indlu kwasekuqaleni nokuba yeyakho okanye yomthengi ngesi siqwenga sesoftware. Ngelixa ayisiyiyo inkqubo yokuyila iphuli ethile eza nemisebenzi eyimfuneko kunye nezixhobo ezilindelweyo nakwisiphi na isoftware efanayo.
Isoftware ikwasisixhobo esipheleleyo sokuyila yonke into ukusuka kumagumbi akho angaphakathi ukuya kubume bendawo yakho. Uyilo lwamachibi okudada, ikhitshi, iigadi, kunye nabanye. Ubuhle bokuyila kwimeko ebonakalayo kukukwazi ukulinganisa ukuba indlu ingabonakala njani kwilizwe lokwenyani.
Ngokwesiqhelo, isoftware yolu hlobo sele iza nezinto ze-3D ukuze abayili akufuneki bakhuphele okanye bafanise ifanitshala yabo. Kuza kunye nelayibrari yokuthungwa ukuze ungahlawuli enye inkonzo ekwi-intanethi apho ukhupha ubugcisa.
Ngelixa unokwenza u-google textures, ungabaleka ungene kwimicimbi yelungelo lokushicilela. Ke ngexabiso elifanelekileyo, le software inokukunika zonke izinto eziyimfuneko ozifunayo.
Umyili oyilo- Ndwendwela iwebhusayithi
Nge-Planner 5D unokwenza uyilo olunemilinganiselo emibini kwaye uyijonge kuseto lwe-3D, le software ivumela umntu ukuba enze uyilo lwangaphakathi nolwangaphandle kubandakanya iiyadi ezinendawo yokulungisa umhlaba kunye namachibi okudada.
Isoftware yoMcwangcisi we-5D inenguqulo yasimahla kunye nenguqulo ehlawulelweyo eneempawu ezongezelelweyo. Inguqulelo ehlawulelweyo ibandakanya ilayibrari yezinto ezingama-5000 ezinokusebenza ukutshintsha imibala, iipateni, izixhobo, udonga kunye nomgangatho.
Ukuyila iphuli engapheliyo
Isicwangcisi 5D - Ndwendwela iwebhusayithi
Isoftware yoyilo lwasimahla lwabanini bamakhaya kunye nabaqulunqi beza kwiimpawu ezahlukeneyo kunye neemfuno zenkqubo. Abanye bahlawule, abanye basimahla kodwa nganye ineempawu zayo ezizodwa.
Ukufumana isoftware elungileyo kuqala ngokubuza ukuba yeyiphi na into efunwa yile projekthi kwaye ayisiyiyo eyona nto ibonakalisa isoftware eza nayo, kwaye ingongoma apho abasebenzisi kufuneka bathathe isigqibo sokuba yeyiphi isoftware abayikhethayo. Uhlahlo-lwabiwo mali lunokuba yingxaki kwabanye kodwa kubalulekile ukuba unganikeli ngomgangatho.
Kolu luhlu silinike lona, ​​ezinye zazo zinokusetyenziswa kokubini kwimeko yobungcali okanye ngabantu abazonwabisa ngokuzonwabisa.
Abafundi bokwakha, uyilo lwangaphakathi, ubunjineli, okanye amagcisa endalo ye-3D banokusebenzisa ezinye zezi ziqwenga zesoftware njengendlela efanelekileyo yokuphucula izakhono zabo kuyilo ngaphambi kokungena kummandla wobugcisa.
macy umama womtshakazi ibhlukhwe iisuti
Isoftware ephuhliselwe ngokukodwa uyilo loyilo iluncedo kwaye iyacetyiswa kakhulu kubaqeqeshi.
Kuxhomekeke kubunzima besoftware, abanye baya ngaphaya koyilo kwaye abanye bade babonelele ngezixhobo zokubala uqikelelo lweendleko zokwakha.
Gcina ixesha kunye nomzamo ekuchazeleni abathengi bakho ngezindululo zeprojekthi yakho ngokuhamba ngesakhiwo kwisithuba se3D ngelixa usebenzisa iinjini ezinamandla zokulinganisa iipropathi zefiziksi ezahlukeneyo njengokukhanya, izithunzi, ukubonakaliswa, kunye nezinye ezininzi.
Ngaba unayo isoftware yoyilo lokuqubha oluthandayo? Nceda usazise kwizimvo.
izimemo zomxholo waselwandle womtshato waselwandle
umtshato enkosi uphawula imizekelo
ungatshata kangaphi kwii-texas
Iingoma zomdaniso womama wonyana ongumama ka-2020
isipho sonyana wakhe ngomhla wakhe womtshato
I-emerald isike isangqa sokuzibandakanya